(Last Nohavaozina: 30/12/2019)
Ny havoana tsara tarehy ny Tuscany fanafina izany maso-misambotra lapan'ny amin'ny tsy manam-paharoa trano. Ny taonjato faha-19 tompony te redesign azy amin'ny Oriental fitaoman. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, dia nifidy ny flair fa tsy misy hafa afaka italiana lapa mitovy.
Naorina-in ny faha-10 tamin'ny taonjato, Valenzano lapa dia iray amin'ireo lapa Fairytale tranainy indrindra mbola mijoro any Italia. Ankehitriny dia mbola toy ny Mampitolagaga sady malaza tahaka ny avy eo. Na izany aza, fa tsy naha-toby, io lapa izao ny trano fandraisam-bahiny, tanteraka tamin'i tenisy fitsarana sy ny taranja Golf.
Fa ny zavakanto tia amin'ny mpitety tany, Montegufoni ho mahavariana toerana halehany. Izany dia ny an-trano ny malaza Room ny saron-tava, misy Gino Severini sary hoso-doko tsara tarehy. koa, dia toa tena manaitra, ary izany dia toerana fa ny olona rehetra dia afaka mahazo.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Fairytale lapa In Italia Ianao Visit” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra fa azafady, fotsiny hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fairytale-castles-italy/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#fairytale #traveleurope trano fiarovana europetravel italyvacation fiaran-dalamby Travel torohevitra travelitaly